PERIKOPA FJKM ALAHADY 07 DESAMBRA 2014 | FJKM Amboniloha
PERIKOPA FJKM ALAHADY 07 DESAMBRA 2014
Isaia 12:1-6 / Jaona 6:34-40 / 1 Jaona 5:10-15
1 Ary hiteny ianao amin’izany andro izany hoe: Hidera Anao aho, Jehovah ô; Fa na dia tezitra tamiko aza Hianao, dia* afaka ny fahatezeranao, ka mampionona ahy Hianao. [Na: Fa tezitra tamiko Hianao, nefa]
2 Indro, Andriamanitra no famonjena ahy; dia hatoky aho, fa tsy mba hatahotra; Fa Jehovah Tompo no heriko sy fiderako, fa efa famonjena ahy Izy.
4 Ary hiteny ianao amin’izany andro izany ka hanao hoe: Miderà an’i Jehovah, miantsoa ny anarany, ampahafantaro any amin’ny firenena ny asany. Ampahatsiarovy fa efa misandratra ny anarany.
5 Mankalazà an’i Jehovah, fa asa lehibe no nataony; Ary aoka ho fantatra any amin’ny tany rehetra izany.
35 Hoy Jesosy taminy: Izaho no mofon’aina; izay manatona Ahy tsy mba ho noana, ary izay mino Ahy tsy mba hangetaheta intsony.
37 Izay rehetra omen’ny Raiko Ahy no hanatona Ahy; ary izay manatona Ahy dia tsy mba holaviko mihitsy.
38 Fa tsy nidina avy tany an-danitra Aho mba hanao ny sitrapoko, fa ny sitrapon’izay naniraka Ahy.
39 Ary izao no sitrapon’izay naniraka Ahy, dia ny tsy hamelako hisy very izay rehetra nomeny Ahy, fa hatsangako indray amin’ny andro farany izy.
40 Fa izao no sitrapon’ny Raiko, dia ny hahazoan’izay rehetra mijery ny Zanaka ka mino Azy fiainana mandrakizay; ary Izaho hanangana azy amin’ny andro farany.
1 Jaona 5:10-15
10 Izay mino ny Zanak’Andriamanitra no manana ny fanambarana ao anatiny; izay tsy mino an’Andriamanitra dia efa nampandainga Ary, satria tsy mino ny fanambarana izay nanambaran’Andriamanitra ny Zanany izy.
11 Ary izao no fanambarany: Fiainana mandrakizay no omen’Andriamanitra antsika, ary ao amin’ny Zanany izany fiainana izany.
12 Izay manana ny Zanaka no manana ny fiainana; izay tsy manana ny Zanak’Andriamanitra no tsy manana ny fiainana.
13 [Ny amin’ny fivavahana ary ny tsi-fitovian’ny zanak’Andriamanitra amin’ny ratsy fanahy] Izany no nosoratako aminareo, izay mino ny anaran’ny Zanak’Andriamanitra, mba ho fantatrareo fa manana fiainana mandrakizay ianareo.
Catégories :	Perikopa FJKM	/ par AnjGab 1 décembre 2014